Policies Yezvikoro | BLI Zvikoro zveMitauro muCanada
Zvese zvaunoda kuti uzive
PaBLI, isu tinoshandisa Chirungu-kana-ChiFrench-Chete Policy. Iyi bumbiro yakagadzwa kuti ikubatsire iwe kuwedzera yako Chirungu kana chiFrench mutauro tsika panguva yako yekudzidza muCanada.
Kuti ikubatsire kunyatso kusimudzira mwero wako wehunyanzvi hwemitauro, unozotarisirwa kuti ungangotaura chete mumutauro wauri kudzidza nguva dzese paunenge uri kuBLI.
Kana iwe ukaputsa mutemo, uchawana chirango:
Kutanga kukanganisa Iwe uchagamuchira Kadhi reYambiro
Mhosva yechipiri Uchamiswa muBLI kwezuva rimwe chete uye unonyorwa sepasipo
Yechitatu mhosva Uchamiswa muBLI kwemazuva matatu uye unonyorwa sepasipo. Iwe unofanirwa kusangana nemurongi wechirongwa
Mhosva yechina Uchamiswa muBLI kwemazuva mashanu uye unonyorwa sepasipo. Iwe unofanirwa kusangana nemurongi wechirongwa
Chikanganiso chechishanu Uchamiswa chikoro panzira imwe chete kana zvakafanana
Kuti unyatsozvibatsira iwe kuvandudza rako kugona kwemitauro, unozotarisirwa kutaurirana chete mumutauro wauri kudzidza nguva dzese paunenge uri BLI.
Kunonoka & kusavapo
BLI inotarisira kuti vadzidzi vave nenguva kusvika kumakirasi avo. Kupinda uye kuchengetedza nguva kwakakosha zvakanyanya pakufambira mberi kwako kwezvedzidzo. Tinotarisira kuti iwe upinde mumakirasi ako nguva dzose uye kuve uchibata nguva kuti usadzivise kirasi uye kuve nechokwadi kuti haupotse chero ruzivo rwakakosha.
· Kana iwe uchinge wanonoka, ratidza kuremekedza mudzidzisi wako uye vaunodzidza navo nekupinda mukirasi uye kutora chigaro chako chinyararire
· Ziva kuti kana iwe uchisvika pa "ABSENT NGUVA" (15 maminitsi apfuura yako nguva yekutanga kirasi) mudzidzisi wako anogona kukurambidza iwe kupinda mukirasi
· Kana paine chero mamiriro ezvinhu arikuita kuti zvive zvisingakwanisi kuti usvike panguva nenguva, taura nemurongi wezvedzidzo nezvazvo
· Vadzidzisi veBLI vanochengeta zvinyorwa zvekupinda kwako mukirasi zuva nezuva
· Kana iwe usipo anodarika makumi maviri muzana muchikamu, haugamuchire zvikwereti zvekosi yauri kutora
· Kana uchirwara kana kuti uchida kukuzivisa nezve iwe usipo ndapota zadzisa iyo kusavapo fomu yekuzivisa.
· Kana iwe wanonoka katatu kukirasi imwe, yakaenzana nekusavapo kumwe. Kana iwe ukapinda zvisingasviki makumi masere muzana, haugamuchire chitupa chavo.
· Iwe une kwemaminitsi mashanu kushivirira
· Kana iwe ukasvika pakati pemashanu kusvika gumi nemashanu maminitsi apfuura kirasi yako yekutanga, uchave unononoka kunonoka
· Kana iwe ukasvika maminetsi gumi neshanu apfuura kirasi yako kutanga nguva, iwe uchaonekwa seusipo
· Kana iwe uchakamisirwa kunonoka kukirasi katatu, ichaenzana nekusavapo kumwe
· Kana iwe ukapinda zvisingasviki 80% yekirasi yako, haugamuchire chitupa chako
Vadzidzi vanouya kwemavhiki makumi maviri nemana uye nezvimwe zvinobvumidzwa kukumbira zororo rekusavapo. Iyi yekusiya yekusavapo haigone kupfuura mavhiki mana. Kana ukapihwa zororo rekusavapo, makirasi ako achamiswa.
Kana uchikumbira kuzorora kwekusavapo, unofanirwa kunge wapedza vhiki gumi nembiri dzekudzidza. Kana iwe uri kuenda kune imwe nyika, iwe unofanirwa kunge uine vhiza inoshanda.
Iko kusara kwekukumbira chikumbiro kunoenderana nekutenderwa kwedhipatimendi redzidzo. BLI haina mutoro wehurongwa hwekufamba iwe hwaunoita kana chikumbiro chako chisina kubvumidzwa.
Unogona chete kukumbira rimwe zororo rekusavapo.
Kukumbira kubvakacha kwekusavapo ndapota tizadza zvedu fomu rekukumbira kuzororo.
Kunyangwe ichi chiri chiitiko chisingawanzoitika, kana iwe uchinzwa kuti kirasi kwawakaiswa haisi kukubatsira iwe kuvandudza hunyanzvi hwako hwemutauro kana kana zvakanyanya kuoma, unogona kukumbira shanduko yekirasi. Kuti uite kudaro, iwe unofanirwa kuzadzisa BLI kirasi kukumbira shanduko fomu, Kana tangogamuchira murongi wezvedzidzo anozokutaurirana kuti uite musangano wekuyedza kunzwisisa mamiriro ezvinhu zviri nani. Shanduko yemakirasi inogona kuitika chete muvhiki yako yekutanga yemakirasi. Iye anokurukura nevadzidzisi vako uye akupe sarudzo yake yekupedzisira mukati memaawa makumi maviri nemana.
Unogona kusimudzira asi kwete kuderedza chirongwa chako. Kana iwe uchifarira kutora hunyanzvi kana hurukuro yakasarudzika yekirasi kumurongi wezvefundo kuti uone kana paine nzvimbo iripo mukosi yaunoda kutora. Anodzidzisa murongi anozokuudza matanho ekutevera.
Isiri Disparagement Policy
1) Kufungisisa: Mukutarisisa kuendeswa kwehurongwa uye humwe hwakanaka uye hwakakosha kufunga, iko kupihwa uye kukwana kwayo kunozivikanwa pano neVadzidzi vese varipo;
2) "Kubviswa" nekuda kwezvibvumirano izvi, kazhinji zvinoreva kutaura kwakaipa nezve Institution kunoitwa noutsinye kana zvisina basa (kusanganisira vese vanhu avo vakafukidzwa pasi pechirongwa ichi) kana vasina kutora matanho anonzwisisika ekuratidza chokwadi chekutaura kwakadaro kusati kwatanga. vadzigadzira.
3) Ndiani akasungwa: Zvingangobvumirwa nemutemo weCanada wakachengetedzwa kuti ushande chero mupurovhinzi (kusanganisira asi pasina muganhuriro mutemo unobata zvikoro zvevashandi vega kana masangano uye weCanada Charter of Kodzero uye Kusunungurwa kana / kwaiitirwa. -disparagement mutemo. Kuomerera kubumbiro mamiriro ezvinhu ekunyoreswa.
4) Chinangwa chemutemo: Sangano iri rine mukurumbira wekuita zvakanaka. Iyo Institution inzvimbo yakazvimiririra inoshanda nzvimbo dzakawanda mupurovhinzi yeQuebec, uye yakazvipira kuchengetedza yakawandisa pakudzidzisa uye pakuona kuti kukosha kweBLI, Bouchereau Lingua International kuvimbika kunoramba kwakasimba.
5) Zvemagariro venhau: Nekuzivikanwa kwemagariro enhau (Facebook, YouTube, Twitter, nezvimwewo) vadzidzi, uye alumni yeInstitution nevese vanobatana nayo, vanogona kutaurirana nenzira yavasati vamboita zvakadaro. Sangano rinorumbidza chokwadi chekuti vadzidzi uye alumni vane mikana mitsva yekubatirana mabasa muchirevo chavo chavakasarudza, uye vanokwanisa kutaurirana nemagariro. Sangano iri rinovimba kuti izvi zvichabatsira kuti Sangano rive nemukurumbira mukurumbira mumusika.
6) Mukurumbira inzira mbiri-nzira: Vadzidzi vanowana rubatsiro rwakakosha kubva mukubatanidzwa kweBLI, Bouchereau Lingua International. Panguva imwecheteyo, iyo Institution inozo "tsanangurwa" ne "kunaka" kwevanopedza kudzidza kuti iko kwavanopedzisira kushanda, iko vari kuyedza hunyanzvi pakubata kwevashandi, uye kana vari kufara nebasa ravo ravakasarudza. Iyo Institution nevadzidzi vayo vanofarira kufararira kuchengetedza nekudzivirira kuvimbika uye mufananidzo weiyo Sangano nevamwe vese vanobatana nayo.
7) Zvakananga zvinoitwa nemudzidzi: Vachifunga zviri pamusoro, vadzidzi vanofanirwa kuita zvinotevera:
a) Ramba kuita chero chirevo chevanhu kana chirevo, kuburikidza nemagariro enhau kana neimwe nzira, nezve iyo Institution kana chero yehukama hwayo, izvo zvingatariswe zvisina kukodzera, zvisina kufanira kana zvinoshoresa, kana zvakasununguka, kana izvo zvinogona kukanganisa zvisizvo mukurumbira weInstitute. kana chero wehukama hwayo;
b) Ramba kuita chero chirevo chevanhu kana chirevo, kuburikidza nemagariro enhau kana neimwe nzira, izvo zvingatariswe zvisina mhaka, zvisina kufanira kana zvinoshoresa, kana zvakasununguka, kana izvo zvinogona kukanganisa zvisizvo mukurumbira weumwe mudzidzi (uye pasina muganhuriro) uripo kana mudzidzi aimbove mudzidzi, alumni, murayiridzi, kana mushandi nhengo yeiyo Sangano;
c) Taura kune iyo Institution nekukurumidza, kuburitswa kwese kusatsoropodza, kutsoropodza, kana kutaura kwakasununguka kana zvirevo, kana chirevo / s izvo zvinogona kuita zvisizvo kukuvadza mukurumbira weInstitute kana chero yeanowirirana nawo, kuburikidza nevezvenhau vezvemagariro kana zvimwewo. Kuzivisa kwakadaro kunosanganisira munyori kana vanyori ve kuburitswa kwakadaro, nezvimwe zvese zvinongedzo zvinozivikanwa kumudzidzi wekuburitsa;
d) Bika kuInstitute nekukurumidza, kuburitswa kwese kusinganzwisisike, kutsoropodza kana kutsoropodza, kana kutaura zvakasununguka kana zvirevo zvinokanganisa kukuvadza mukurumbira weumwe (uye pasina kumisikidza) uripo kana aimbove mudzidzi, alumni, murayiridzi, kana mushandi weZiko kana chero wehukama hwayo. Kubika kwakadaro kunosanganisira munyori kana vanyori ve kuburitswa kwakadaro, nezvimwe zvese zvinongedzo zvinozivikanwa kumudzidzi wekuburitsa.
e) Ramba kunyadzisa iyo Sangano kana chero yakabatana nayo mune chero imwe nzira inganzi inofungidzirwa kuunza iyo Institution kana chero yehukama hwayo, uye pasina muganho, fambisirwo yayo, vashandi, vadzidzi kana alumni, mukuzvidza;
f) Vanozvizivisa nehurongwa hwese hunovasunga apo vadzidzi, kusanganisira asi zvisina muganho, Anti-Kudheerera / Anti-Kushusha / Anti-Discrimination Policy.
8) Kuranga kwekusateedzera: Kurangwa, kusanganisira kudzinga kana zvimwe zvirango sezvakakodzera, zvinogona kubva mukusatevedzera Mutemo uyu.
Bouchereau Lingua International (BLI) yakazvipira kutora matanho ese ane hungwaru kuti ive nechokwadi chekuti vadzidzi vane mukana wekupedzisa zvirongwa zvavo. Mukati meiyi gadziriso, vadzidzi vese vanobatwa zvakanaka uye zvakaenzana. Vadzidzi vasingatsigire zvinangwa zvedzidzo uye zvetsika zveBLI ivo pachavo nevamwe vavanodzidza navo vanogona kunge vachinge vapihwa zvirango, kusvika uye kusanganisira kudzingwa.
Muzhinji, BLI ichaedza kugadzirisa mamiriro ezvinhu pasina kudzingwa. Nyevero dzemuromo, yambiro dzakanyorwa uye kumiswa kunogona kutanga izvi zvekupedzisira uye zvakanyanya kukanganisa kwezviito.
Kana BLI ichiona kutendeka, kuchengetedzeka kana kugara zvakanaka kwevadzidzi vayo, vashandi, vatengi kana vamwe vashanyi vari munjodzi, ipapo kudzingwa kunogona kuitirwa chisarudzo chechikoro panguva ipi neipi mukuita kwacho.
1) Vadzidzi vese vanotarisirwa kuzvibata nenzira inokudzwa uye nehunyanzvi.
2) Vadzidzi vanogona kumiswa kana kudzingwa / kudzingwa, zvichienderana nekuomarara uye / kana degree re "Kusazvibata" kwavo: Kusazvibata kunotsanangurwa se, uye pasina muganho:
a) hunhu hunokanganisa kana mune chero chinhu chekuremekedza chinokanganisa Chikoro kana chero yevadzidzi vayo, kusanganisira manejimendi echirongwa (kusanganisira asi pasina muganho chero chiito kana kutyisidzirwa chiito chemhirizhonga, kutadza kubatana neyakaiswa kana mutemo wekugara pachikoro. )
b) kuita kwevadzidzi kunounza kuzvidzwa kune hunyanzvi, hwedzidzo, kana hunhu hwechikoro
c) kufoira pakudzidza
d) kusapinda zvakanaka, kureva kuenda kunowira pasi pechimwe chirongwa chekubvumidzwa nechirongwa, kana kutora chikamu chakasarudzika (pasina chikonzero chekurapa icho chinopa chinodiwa pamutemo chekugara)
e) hunhu hunokanganisa kodzero dzepamutemo dzevamwe vadzidzi uye / kana chikoro, vashandi vayo, vamiririri, kana vashandi
f) kutyorwa kwakadzokororwa kwemitemo yeSchool sezvakanyorwa muchibvumirano cheKunyoresa kweVadzidzi ichigadziriswa nguva nenguva sezvinoonekwa neChikoro sezvakakodzera, kana maererano nemitemo inoshanda uye / kana mirau;
g) kutadza kubhadhara mari inodiwa sezvakatemwa muchibvumirano chakasainwa nemudzidzi;
h) kutyora zvinodiwa nemashandiro kana mimwe mitemo uye / kana nhungamiro sezvavanogona kushandisa kumudzidzi; uye
i) kugoverwa kwemidziyo mukati memusasa uye kuvadzidzi veChikoro vasina kubvumidzwa neChikoro (senge mabrochure, kushambadzira bato rechitatu, zvigadzirwa zvekusimudzira, zvematongerwo enyika kana zvekunamata, nezvimwewo)
3) Kudzokororwa kutadza kutevedzera mitemo yeChikoro, iyo inogona kugadziriswa nguva nenguva sezvo Chikoro chichiona kunge chakakodzera kana kutevedza mutemo unoshanda uye / kana mirau, zvikonzero zvekudzinga / kubvisa. Ziva kuti kupokana nemimwe mitemo yechikoro kunogona kutungamira kudzingwa / nekudzingwa pachirongwa zvinoenderana nekuomesa kwemhosva (ona ndima 5 pazasi).
4) Chikoro chinogona, sekufunga kwayo uye chinoenderana nemitemo inoshanda uye / kana mirau, inofunga nezveKumisa kusati kwaitwa kudzingwa / kudzingwa kwemudzidzi.
5) Dzimwe mhando dzekusazvidzora dzakakomba dzinotungamira kudzingwa / kudzingwa kwemudzidzi pachikoro che "zero zero". Maitiro akadaro anosanganisira, asi pasina parinogumira
a) kutyora zvinodhaka zveBLI uye mutemo wedoro
b) Mhirizhonga uye / kana kutyisidzira maitiro kune mumwe mudzidzi, mushandi, nhengo yefemberi, kana mushanyi pachikoro
c) Kusatendeseka kwedzidzo kunoitwa nemudzidzi ane chekuita nekuyedza kana humbowo, kana kusatendeseka kuri kuenda kuvimbika kweChikoro sekudyidzana kusabvumidzwa, kushandurwa kwemarekodhi, chiokomuhomwe, kana chero rudzi rwekutaura zvisirizvo.
6) Kushungurudza kana Kusarura - BLI, Bouchereau Lingua International hairegere kushungurudzwa kana kusarura chero mudzidzi, vashandi, vashandi kana maajenzi. Vadzidzi vanoita kushungurudza kana kusarura vanoitiswa nekumiswa nekukurumidza kumirira kuferefetwa. Chero mudzidzi anofungidzirwa neBLI, vaBouchereau Lingua International vanoongorora sevasingaite basa rekushungurudza kana kuita rusarura zvinopesana nemimwe mirawo nemirairo inogona kutangwa nekudzingwa nekukurumidza. Mukusarudza kuti chii chinomiririra kushungurudza kana kusarura, BLI inoreva Iyo Quebec Charter Yekodzero Dzevanhu uye Kusunungurwa.
7) Vadzidzi avo nemaitiro kana kuregeredza munzira chero ipi zvayo vanoisa pangozi kuchengeteka kwavo ivo kana vamwe vanogona kudzingwa.
8) Vadzidzi vanokanganisa, kuba uye kushandisa zvisizvo midziyo vanogona kudzingwa uye vanozodikanwa kuti vadzorere kutsiva kana kugadzirisa zvakakwana chivakwa.
9) Vadzidzi vanotyora kodhi yemafambiro vanogona kumiswa kana kudzingwa. Kunyangwe iko kutyorwa kwacho kusingakwanise kukuvadza vanhu kana chivakwa, BLI inogona kudzinga mudzidzi uyo akamiswa kumiswa nekuda kwekutadza kutevedzera uye abva atyora chero eiri mamiriro ebumbiro remitemo yeBLI.
10) Mari dzemubhadharo dzichazotongwa nezvinopihwa muchibvumirano ichi nemitemo inoshanda uye / kana mirau sezvakarairwa. Nekudaro, uko BLI, Bouchereau Lingua International isina mutemo wepamutemo / chisungo chekudzosera mari yechikoro kana chero chikamu chedzidzo yemudzidzi kune chero mudzidzi akadzingwa (kana akamiswa, iko kumiswa kwenguva yakareba zvekuti mudzidzi arasikirwa nemari yakakura. yenguva kana mukana waungadai wakashandiswa mukufunda uchidzidzira), BLI, Bouchereau Lingua International ichave isina chisungo chekudzosera mari yezvidzidzo kana chero chikamu chedzidzo yemudzidzi.
11) Chirango chekumiswa kana kudzingwa / kudzingwa chinonyorwa pamudzidzi wemudzidzi uye chinyorwa
12) Vadzidzi vari pasi pekudzingwa nekuda kwechikonzero chero chipi zvacho vanozoziviswa nekunyora, kungave neemail, tsamba inotumirwa neruoko kana netsamba yakanyorwa. BLI haina mhosva yekusa- ‐ kutumirwa nekodhi rakanyoreswa kana mudzidzi asina kupa kero yekugara yakakodzera. Icho chiziviso chichava nerondedzero yeiyo hwaro hwekudzinga uye zuva rinoshanda. Vadzingwe vadzidzi vanopokana chokwadi chekudzingwa vanofanirwa kukwidza sarudzo mukati memazuva matatu echiziviso zvichitevera nzira yekunyunyuta yeBLI yakapihwa mudzidzi uye nekupa humbowo hwakakwana hwekutsigira kunyunyuta. Vadzidzi vanokanda chikumbiro uye vasina kubudirira vanoonekwa vachibviswa kubva kuBLI
13) Nzira yekukwirira: Vadzidzi vakadzingwa vanopokana nezvokwadi yekudzingwa / kudzingwa vanofanira kufaira kukwidza kwavo neChikoro mukati memazuva mashanu ekuziviswa kuti vanga vatambira nemudzidzi.
Mudzidzi anodzingwa ane basa rekudzosa chero pfuma yechikoro iri yake mukati memazuva gumi kubva pakudzingwa uye anozochengetwa aine mari yezvekutengesa chero zvivakwa zvisina kudzoserwa mumamiriro akanaka
14) BLI inogona, nemafungiro ayo, kuona kuti gadziriro yekudzora yakarongedzwa panzvimbo kana mukuwirirana nemhando ipi neipi yepamusoro yekuraira iyo yaanoda kurudzira. Maitiro ekudzoreredza ndiyo inosimbisa kugadzirisa kukuvara kunokonzerwa kana kuratidzwa nekusazvibata kuburikidza nechinhu chakabatanidzwa kana chekudyidzana
Zvinodhaka, zvisiri pamutemo Zvidhakwa uye Doro
· Kushandiswa kwezvinodhaka uye doro zvinoregererwa pachikoro cheimba.
· Kunwa kweCannabis hakubvumidzwi pane chimwe chivakwa chechikoro, kuzviitiko zvechikoro, zviitiko kana nzendo uye mafambi uye chero munhu, chero vashandi kana vadzidzi.
· Chero underage / mudiki mudzidzi ane, anoshandisa, anotengesa kana kugovera zviri pamutemo (semuenzaniso mbanje, mishonga yekunyora, nezvimwewo) kana zvinodhaka zvisiri pamutemo, paraphernalia yezvinodhaka, doro kana fodya chero nguva achiri pazvivakwa zvechikoro, kana ari pasi pesimba rechikoro, inoiswa pasi pechirango chakakomba, kusanganisira kumiswa kana kudzingwa
· Iyo mirayiridzo yechikoro pamishonga uye doro inoshandawo kune ese BLI nzendo uye zviitiko. Chikoro chinochengetera kodzero yekutsvaga chero midziyo yemudzidzi kana mudzidzi iyeye achifungidzirwa kuti ane zvinodhaka kana zvinhu zvisiri pamutemo kana zvinhu muchikoro, panzendo uye zviitiko. Vadzidzi vanofungidzirwa kuti vari pasi pesimba remishonga kana doro vanosangana nemhedzisiro yakakura, kusanganisira kumiswa kana kudzingwa
Homestay Mitemo & Nongedzo
Kuremekedza kwakakosha pakugonesa kuwirirana kwakanaka pakati pako nemhuri yako. Izvo zvakakosha kuti uremekedze iwo mitemo.
Basic Imitemo Mitemo
· Ratidza kufunga uye kushivirira kubata nhengo dzemhuri
· Zivisa mhuri kana usingave kumba zvekudya, unosvika kumba manheru, kana kurara husiku
· Zvichenese iwe mushure meimba
· Chengetedza imba yako yakachena uye yakarongeka
· Ndokumbirawo usachengeta chikafu kana kudya mumba mako
· Usapinda mumba yekurara, mudzimba dzekuvanzika, kana mumba yekugezera kana yakagara
· Usakwereta mari kune nhengo dzemhuri dzinotambira
· Gara uchipfeka zvakanaka uye uchifukidzwa kana paine varidzi vemhuri vanogamuchira
Mhuri yako yekugamuchira inokutambirai mumba mavo senhengo yemhuri. Izvi zvinoreva kuti iwe unozobatwa zvisina kurongeka kupfuura zvaingaitwa ne "muenzi". Mhuri dzinozvikoshesa kana iwe uchibatsira kubatsira mumba nekuchengeta mukamuri yako yakachena uye nekuita mabasa epamba, akadai sekuisa tafura, kushambidza ndiro, kana kubatsira kugadzira kudya kwemanheru.
Semitezo yemhuri, unogona kukumbirwa kuti uite yako yekudya kwemangwanani uye yekudya kwemasikati, kana kuti uite yekuwachira nekuti izvi ndizvo zvinoitwa nenhengo dzemhuri dzakawanda.
Rangarira, hausi kugara muhotera inopihwa maid services.
Kubatsira nemabasa epamba aya kunokupawo mukana wekutaura kunhengo yemhuri, kudzidzira chiRungu chako, uye kuve chikamu chemhuri.
Kudya katatu pazuva kwakajairika. Kana mhuri yako yaunotambira ikaitika isipo chikafu chinobva chavepo kuti iwe ugadzire. Kazhinji, vadzidzi veCanada vanogadzira yavo yemanheru yekuenda kuchikoro.
Pakati pevhiki, kudya kwemangwanani kudya kwakakurumidza, kwakapusa. Mhuri dzinogona kugadzirira kudya kwemangwanani pamwe chete; chikafu ichi chinogona kusanganisira chingwa / mbiriso / michero, muto / mukaka, uye zviyo / mazai.
Kwekudya kwemasikati kunogona kusanganisira masangweji, miriwo miriwo, makuki, mukaka / muto, uye michero.
Kudya kwemanheru kunogona kusanganisira mupunga, nyama, miriwo yakabikwa, saladi uye dhiziri.
Mhuri yako yekugamuchira inokubvunza kuti ndezvipi zvekudya zvaunofarira uye zvausingade kuitira kuti vaedze kuyedza zvaunoda. Iwe unofanirwa kuzivisa nehukama mhuri yako kana usingade chimwe chikafu.
Mhuri zhinji dzeCanada dzine mhuka dzinoita kunge kitsi uye imbwa. Vanowanzo kuchena uye vane hushamwari. Kune yako yakamubata mhuri, mhuka dzinovaraidza nhengo yemhuri, saka vakasununguka mumba. Ita kuti mhuri izive kana iwe usingade kuti zvipfuyo izvi zvipinde mukamuri rako.
Iwe uchapihwa seti yemakiyi eimba kuitira kuti iwe ugone kuwana mairi chero nguva. Ndapota chenjera kwazvo navo. Kana iwe ukaitika kuti uvarase, zivisa mhuri yako nekukurumidza. Iwe uchave nemutoro wemutengo wekutsiva kiyi.
· Usatore kana kurodha data rakakura • Usa download mimhanzi kana mavhidhiyo.
· Ratidza maitiro ane hutsika uye ane hutano mukushandiswa kwehunyanzvi.
· Dzima magetsi kana usiri mukamuri yako
· Pedza nguva yakaringana mugeze / shawa
· Imba inochengetedza tembiricha inonakidza panguva yechando (20 degrees approx.)
· Usanyanye kupaza makamuri
· Kudzokorora. Dzimba dzinogona kuva nenzvimbo dzakawanda dzekukanda marara. Kazhinji mapepa, makani nemapurasitiki anoiswa mumidziyo dzakasiyana. Mhuri yako ichakutsanangurira izvi.
· Bvunza mhuri yekutambira usati washandisa midziyo yemumba kana zvishandiso uye woishandisa munzira dzinotenderwa nemhuri.
· Kurumidza dzorera mhuri kana iwe ukonzera chero kukuvara mumba yekugezera
· Usacheka vhudzi rako mukati meimba, dhayi yacho inokuvadza uye inokanganisa chero zvayinobata.
· Vakadzi havafanirwe kukanda mapadza avo muchimbuzi, asi variputise nematehwe uye ndokuakanda kure.
· Usakanda zvinhu muchimbuzi kunze kwepepa rechimbuzi
· Ndokumbirawo ukande bepa rechimbuzi muchimbuzi, kwete mubasiketi
· Shandisa runhare kwenguva dzakareba kwenguva, bvunza mvumo yekufona kureba uye uchiita idzi nhare dziunganidze kana kushandisa kadhi rekufona. Isu tinovatengesa kubazi rezvemitambo.
· Iwe uri 100% mutoro wekubhadhara chero mafoni akareba aunogadzira
· Usaisa kana kugamuchira mafoni mushure megumi pm
Kana iwe uchida kukoka munhu kumba, iwe unofanirwa kutanga watora mvumo kubva kumhuri yako. Hapana vashanyi vanobvumidzwa kuti vagare husiku humwe chete, kunze kwekunge mhuri yako yekugamuchira ikupa mvumo yeizvozvo.
Iwe haufanire kubhadhara mhuri yekugara kwako zvakananga. Iwe unofanirwa kubhadhara BLI uye ipapo BLI Homestay department rinobhadhara mhuri. Kubhadhara kwega kwega kunotora mavhiki mana epekugara uye chirongwa chekudya chawakasarudza. Ita yako yekubhadhara kanokwana vhiki mbiri isati yapera vhiki ino Zvikasadaro, hatigone kuvimbisa kuti imba yako ichave yakakuchengetera iwe.
Vadzidzi vanogara mumba yekutandarira vane vhiki imwe yekushandura nguva. Kana mukati menguva ino, nekuda kwechimwe chikonzero, haunzwi wakasununguka mumusha wauri kugara mauri, unogona kutamiswa kuenda kune imwe imba yekubhadhara pasina muripo, asi unofanirwa kutanga wakurukura dambudziko iri neanogadzirisa imba yako. Ndapota ita izvi mukati mevhiki yako yekutanga, nekuti kana iwe ukakumbira shanduko mushure meChishanu, iwe mavhiki unofanirwa kubhadhara shanduko.
Ndapota cherekedza kuti hauzotamiswa ipapo. Mushure mekuongorora mamiriro ezvinhu, murongi wemba anotaurira mhuri kuti vaone kana chiri kunetsa chingagadziriswa. Kana dambudziko racho risina mhinduro, saka murongi wemumba anozokuudza nhanho dzekutevera.
Kana iwe uchida kuchinja imba yako, kana kana uchida kubuda unofanira kupa kana masvondo maviri akanyorwa chiziviso kuBLI usati wabuda kunze. Masvondo mana ekutanga epamba haadzoreke.
Ukangopedza chirongwa chako chedzidzo, unotarisirwa kusiya imba yako. Kana iwe uchida kuwedzera nguva yako yekugara, bvunza dhipatimendi rekuvakira dzimba pakarepo uye uvazive nezve yako chaiyo nguva yekubva.
Ndokumbira kuti uone kuti kana iwe uchinge uchiita mukutyorwa kwakakomba kwemitemo yekudzimba unobva wabvisirwa imba yekubhadhara uye mari yaunobhadhara haidzoreke.
Chii chinonzi Kudheerera?
Kudheerera ndiko kuita nemaune kukuvadza mumwe munhu asina simba rekuzvirega. Kudheerera, kushungurudza kana chero imwe nzira yekusarura kwakaipa uye kunotokanganisa kodzero yemunhu kuti unzwe wakachengeteka.
Chii chinonzi kushungurudza?
Kudheerera kunogona kutora nzira dzakawanda. Inogona kunge iri:
kumeso-kune-kumeso izvo zvinosanganisira, kurwa, kusundidzira, kutuka, kunyadzisa, kutyisidzira kana kupinzisa nzvimbo yako pachako.
kudzokera kumashure, zvakadai sekunyora kutyisidzira kana kutyisidzira mameseji kana kutumira mameseji anokuvadza kana anotambudza.
Panyama kana kwepfungwa
Kushungurudzwa pabonde, izvo zvinosanganisira chero maitiro asingadiwe sekubata zvepabonde, majee asina kunaka kana kutaura uye / kana kudzora mumwe munhu.
Kushungurudza madzinza, kunosanganisira kuseka, kubviswa munharaunda kana kutsvinyirwa nekuda kwedzinza remumwe munhu.
Ndinoziva sei kana ndiri kudheererwa?
Kuti maitiro aparadzirwe sekudheerera, hunodzokororwa hunhu hunofanirwa kuve hwakabatanidzwa. Aya maitiro kana zviito zvakagadzirirwa kukonzera kukuvara. Kusave kudiwa kana kufarirwa kana kusava neshamwari chero chiratidzo hachisi chiratidzo chekushungurudza uye chinogona kungova chiratidzo chekushaiwa hunyanzvi. Kudheerera hakuwanzo kuitika nevakuru kana vakuru. Chero munhu anogona kudheedzera chero munhu.
Izvo zvakakosha zvekushungurudza ndezvekuti zvinodzokororwa, zvinokonzera kurwadza uye kushungurudzika uye zvinosanganisira kushandiswa kwesimba nenzira isiriyo.
Chii chandinoita kana ndiri kudheererwa?
Kana iwe uchidheedzerwa, zvakakosha kuti utaure kune mumwe munhu ari kutungamira. Pane nguva dzose mumwe munhu anogona uye anoda kukubatsira. Vamwe vadzidzi havadi kutaurisa vachidheerera nekuti vanonzwa senge vachanyanyisa kudzvinyirira kana munhu anodheerera akaziva. Nekudaro, pano paBLI, vashandi vese vanodzidziswa nzira idzo dzinozobatsira nekudzivirira vanotambura.
Kune vashandi vanoverengeka vaunogona kuudza kana iwe uchinzwa kusagadzikana kana kusachengeteka:
-school director, maneja wechikoro
-receptionists, vadzidzisi, varongi vezvidzidzo
Ita chinhu cheRITE
Ziva kuti unogara uine kodzero yekunzwa wakachengeteka. Zivisa vanhu vanoshungurudza ivo ivo vanofanirwa kumira. Udza mudiwa anoshanda. Ongorora mamiriro acho ezvinhu uye kana zvisiri kuita zviri nani, tsvaga rumwe rubatsiro.
Kana iwe wakanyatsobudirira chirongwa chako chedzidzo paBLI tinokupa iwe Chitupa cheKubudirira icho chinoratidza chirongwa chawakatora, uye izvo zvidzidzo zvawakadzidza. Rangarira kuti kuti ugamuchire ichi chitupa iwe unofanirwa kunge wapfuura zviyero zvako zvese nekavha yepakati yegumi nemakumi manomwe uye wakapinda zvinosvika makumi masere muzana muzana emakirasi ako.
Pakupera kwega kwega kwega kwevadzidzisi vako vanokupa yako yekupedzisira giredhi yekirasi yavo. Pazuva rekupedzisira rechikamu chega chega, uye kana wapedza zvidzidzo zvako paBLI, iwe uchagashira rimwe nerimwe rongedzerwa mushumo wekufambira mberi kubva kumudzidzisi wako wegirama. Kana iwe uchida iwe rakadhindwa mushumo wakabatanidzwa wemakirasi ako ose, ndapota ndokumbira maawa makumi mana neshanu kubva pamberi pezvedzidzo department.
Pamunokumbira, tinokwanisa kupa Retsero Yekudzidza inotaura kuti wakadzidza paBLI. Tsamba iyi inoratidza huwandu hwese hwezvidzidzo zvawakadzidza pavhiki, kureba kwekudzidza kwako, zvawanikwa uye kuvepo. Ndokumbirawo ubvunze iyo maawa makumi mana neshanu pamberi pebazi rezvedzidzo.
Kanzura uye Refund Policy
Vadzidzi vanoda kufambisa kutanga kwechikoro vanofanira kuzivisa BLI zvisati zvaitika. Tsamba itsva yekugamuchirwa ichazobudiswa kune imwe nguva mushure mokubhadhara mari kune vadzidzi vari pasi pemwedzi ye6. Vadzidzi vanodzidza kwemwedzi ye6 vachapiwa $ 70 CAD.
Zvose zvinyorwa zvekuregererwa zvinofanira kupiwa zvakanyorwa nekunyora tsamba, fax, kana e-mail inotaura kuti unofunga kubvisa purogiramu yawakanyoresa. Iko kubhadhara uye mari yekugara kwekugara inenge isingadzokeri.
Kana mudzidzi achifanira kubvisa purogiramu yake nekuda kwekurambwa kwevisa, kubhadharwa kwakakwana kuchabhadharwa kusina kubhadhara mari yekubhadhara uye mari yekuisa mari yekugara. Cherechedza kuti BLI inoda kugamuchira tsamba yeCanada yekutanga yekuramba.
Vadzidzi vanofanira kuwira mukati memazano anotevera kuti vakwanise kubhadharwa:
Pamberi purogiramu kutanga zuva
a) Asingasviki mazuva gumi mushure mekutumira kunyoresa kwako- 10% yemari yechikoro.
b) 31 mazuva kana kupfuura chirongwa chisati chatanga · 70% yemari yechikoro.
c) Kana iye mudzidzi akadzima isingasviki mazuva makumi matatu chirongwa chisati chatanga zuva- 30% yemari yechikoro.
Mushure mekutanga kwepurogiramu
a) Pakati pe1-10% yechirongwa · 50% yemari yechikoro.
b) Pakati pe11 - 24% yechirongwa · 30% yemari yechikoro.
c) 25% kana zvimwe zvechirongwa · 0% yemari yechikoro.
Vadzidzi vanogona kuvandudza asi kwete kuderedza purogiramu yavo. somuenzaniso kana mudzidzi achida kuchinja kubva purogiramu yakazara yepurogiramu yepurogiramu yenguva pfupi, iye / iye achafanirwa kubvisa purogiramu ndokudzorerazve. Dare rekudzima richashanda.
* Kana mudzidzi achiuya kuCanada ane BLI chidzidzo chekudzidzira, iye anorasikirwa nekodzero yekubhadhara kwose.
Homestay kuiswa mari isingadzokeri. Vadzidzi vanofanira kupa vhiki dzeC2 zvinyorwa kumunyori kumubati wenharaunda kana vachida kuchinja musha wavo. Mavhiki ekutanga e4 ekubhadhara mari haasi kudzorerwa.
Nguva yekugadzirisa mari
Kana iye akakodzera kubhadharwa pasi pemitemo iri pamusoro apa, iwe uchadzorerwa mukati mezuva re45-shanda mushure mekubvuma kwechirongwa chinyorwa chekuregesa.
Ndapota cherechedza kuti mari yekubhadhara uye mari yekuisa mari yekugara inenge isingadzoserwi pasi chero mamiriro ezvinhu
1) Chikoro (icho chinonziwo "isu", kana "isu" pasi pePolisi iyi) chakagadzira iyi danho kuitira kuti tiratidze kuzvipira kwedu kuvanzika uye kuchengetedzwa kweruzivo nezvako ruzivo, ruzivo zvinoenderana nemutemo wezvinovanzika. Ndokumbirawo kuti muverenge mutemo uyu kuti unzwisise kuti ruzivo rwewe pachako runorapwa sei.
2) Chikoro chinounganidza ruzivo munzira dzinoverengeka. Imwe yeruzivo rwevanhu yakaunganidzwa kana iwe ukanyoresa nesu. Munguva yekunyoresa, chikoro chinogona kukumbira ruzivo rwevanhu vakaita senge zita rako, email kero, jenda, zip / positi kodhi, basa, indasitiri uye zvaunofarira.
3) Tinogona kukumbira iwe ruzivo uri wega kunze kwemamiriro ekunyoreswa, kusanganisira (asi isina kuganhurirwa) kana iwe uchirodha faira (senge .PDF faira) kubva kuchikoro; paunobvunza isu kuti tisangane newe; paunobatana nesu tsamba yekutumira; uye paunoshuma dambudziko rine chekuita nemasevhisi atakapa kana kosi dzakapihwa. Kana iwe ukatibata isu tinogona kuchengeta rekodhi yeiyo tsamba.
4) Kana avo vangangove vadzidzi, kureva vavanyoreri vakatipa ruzivo rwakadai sezita ravo, kero yekutumira, nhamba dzefoni, uye e-mail kero, isu tinoshandisa ruzivo rwuno rwekutumidzira kutumira ava vanyori rumwe ruzivo nezve chikoro uye BLI, Bouchereau Lingua International. Ruzivo rwemumiriri rwekusarudza runogona kushandiswawo nesu kutaura naye zvakananga. Vachavhara vanogona kusarudza kusatambira remangwana kutumira kana kumwe kutaudzana kubva kuchikoro chero nguva nekuzivisa iye Mudzidzisi
5) Hatizochengetedze kana kuramba pasipoti yemudzidzi wepasi rese, Kudzidza Mvumo, kana gwaro rakafanana chero mamiriro ezvinhu.
6) Hatizotengese kana kurenda ruzivo rwako pachako kune vechitatu tisina kuwana chako chakanyorwa mvumo. Kazhinji, chikoro hachitengese kana kuburitsa ruzivo rwemunhu muchiitiko chero chipi zvacho.
7) Webhusaiti yechikoro iyi inopa ruzivo rwakawanda runotora nyaya dzakawanda. Nepo chikoro ichi kuyedza kupa ruzivo rwakakwana kune avo vanoshandisa saiti, hazvipe vimbiso maererano nekujeka kana kuvimbika kwechinyorwa ichi. Webhusaiti yechikoro uye / kana chero zviripo paintaneti zvine chekuita nechikoro, hachiite chibvumirano kana chivimbiso kubva pachikoro kune vashandisi vesaiti yacho, vangave vari vangangove vadzidzi, vadzidzi, kana zvimwewo.
8) Webhusaiti yechikoro ine matanho ekuchengetedza uye akachengetedza ari munzvimbo yekudzivirira kubva pakurasikirwa, kushandiswa zvisizvo, uye kushandura ruzivo rwuri pasi pesimba redu chero nguva. Nekudaro, sezvo pasina kuendesa dhata pamusoro peInternet yakachengetedzeka zvachose hatigone kuona kana kuvimbisa kuchengetedzeka kweruzivo rupi nerupi rwunotitumira kwatiri kana zvine chekuita nezvezvigadzirwa zvepaInternet kana masevhisi, uye unozviita nenjodzi yako wega. Kana tangogamuchira kutumira kwako, tinoita zvese kuedza kuona kuti zvinochengetedzwa nesu. Iwe unofanirwa kuve uchiri wega mutoro wekuchengetedza kuvanzika kwepassword dzako uye / kana chero ruzivo rwe account.
9) Isu tinogona kuchengeta uye dzimwe nguva kutevedzera ruzivo nezvewe. Tingaite izvi kuitira kuti tiwedzere kuita yedu webhusaiti kana online mafomu, kana kutibatsira kuti tinzwisise vangave vari kufarira muzvirongwa zvedu.
10) Zvichienderana nekuregererwa chero kupi kwemutemo uko kunotitendera kuburitsa ruzivo rwako pachako sezvazviri, hatidi kuburitsa chero ruzivo rwako pachako kunze kwekunge tave neruzivo rwekuzivisa. “Ruzivo Rwevanhu” inotsanangurwa zvakanyanya nekutonga mutemo sewese ruzivo nezve munhu angazivikanwa kunze kwezita, zita, kero yebhizinesi kana nhamba yefoni muhofisi yemushandi wesangano.
11) Tichimirira kubvumidza kusabvumirwa kusunungurwa pasi pemutemo weazvino, tinogona kuburitsa ruzivo rwevanhu kana tine chikonzero chekutenda kuti kuburitsa ruzivo urwu kunokosha kuti tizive, kufambidzana, kana kuunza matanho epamutemo kune mumwe angave ari kutyora mutemo wechikoro, kutyora chero mutemo wedunhu. yeOntario kana Canada, kana kuti inogona kunge ichikonzera kukuvara kana kukanganisa (pamwe nemaune kana nemaune) kodzero yechikoro kana chivakwa, vamwe vadzidzi kana nhengo dzefemberi, kana chero ani zvake anogona kukuvadzwa nemabasa akadaro. Tinogona zvakare kuburitsa ruzivo rwako pachako kune yekuunganidza hofisi nekuda kwezvikonzero zviri pamutemo zvekuunganidza chikwereti chedu chakapihwa newe.
12) Isu gwara maererano nekushandiswa, kuunganidza, kuchengeta, uye kuburitsa zvinyorwa zvese zvevadzidzi zvinotongwa nemutemo wekuvanzika unoshandiswa pamwe nezvinopihwa nezvimwe zviitiko zvinoshanda neMimwe Mitemo.
13) Isu tinoita kuyedza kwese kuti nguva nenguva kuvandudza yedu yeChakavanzika Policy zvekuti inotevedzera mutemo wekuvanzika, uye chero mirau inoshanda ipapo.
14) Chikoro ichi zvakare chinotevedzera chero mitemo maererano neVideo Kuongororwa Policy. Kupfupisa, kusvika pamwero waanoshandisa kana kuti uchatsvaga kushandisa kuongororwa kwevhidhiyo, chikoro chinodaro
(a) kuve nechokwadi kuti pane chikonzero chebhizinesi chinonzwisisika chekutarisa;
(b) tsvaga kunzvenga kutora mifananidzo yevanhu vasiri kutariswa nechinangwa chakati;
(c) kusvika pazvinogoneka, tsvaga kusashandisa makamera munzvimbo dzinotarisirwa vanhu zvakavanzika;
(d) kusvika pazvinogoneka, tsvaga kuzivisa vadzidzi nevamwe vanhu nezvekushandiswa kwemakamera vanhu avo vasati vapinda munzvimbo iyi;
(f) data rakaparadzwa mukati memazuva gumi nemana kubva pazuva rekutorwa
(g) kuona kuti michina yekuongorora vhidhiyo nematepi evhidhiyo zvakachengetedzwa uye zvinoshandiswa zvinangwa zvinotenderwa chete;
(h) chengetedza kuti kusvika padanho rekuchengetwa kwemifananidzo, kuti inochengetwa munzvimbo yakachengetedzeka isina mukana wakakwana;
(i) mifananidzo yakanyorwa inotarisirwa neDhipatimendi reIT.
15) Mudzidzi anoburitsa Sisitimu uye anopa mvumo yekupa rezinesi uye kushandisa zvese mifananidzo uye marekodhi ezwi mune chero midhiya uye chero chinangwa. Mudzidzi anobvuma kuti iyo Institute ine kodzero dzese kumifananidzo uye kurekodhwa kurira nekusingaperi. Chibvumirano ichi hachichinjiki, pasi rose uye chisingaperi.
16) Kana iwe uine mubvunzo kana kunetsekana nezve yedu Yakavanzika uye Vhidhiyo Kuongororwa Policy kana maitiro edu mune izvi, ndapota taura neManagement Manager.